Kooxda Waxsoosaarka Bracalente - Kooxda Waxsoosaarka Bracalente
CORONAVIRUS (COVID-19) UPDATE (halkan guji)
2: Soo saarista Qandaraaska
3: silsilad sahay ah
4: Hubinta Tayada
5: Maareynta Khatarta
6: Horumar joogto ah
Industries u adeegaan
Xeeladaysan | Difaaca
Awoodaha, Qalabka & Shahaadooyinka
Dhaqanka iyo Xirfadaha
Kooxda Waxsoosaarka Bracalente
Xalka Waxsoosaarka Saxitaanka loogu talagalay Suuqa Caalamiga ah
Daawo Sheekadeena geesinimada leh
In ka badan seddex fac, waxaan siinaynay xalal wax soo saar macaamiisheena.
Qaybahayagu waa qaybo muhiim ah oo ka caawiya horumarinta warshadaha laga bilaabo Aerospace, Gawaarida, Beeraha iyo Elektarooniga illaa Warshadaha, Caafimaadka, Saliida & Gaaska, Madadaalada iyo Taatikada. Farqiga noo dhexeeyaa waa habka aan u wajaheyno ganacsigaaga. Dadkeenu waa kordhinta kooxdaada. Waan ognahay wax soo saarka maxaa yeelay waxaan nahay soosaarayaal wax ka dhisa xalka ganacsigaaga.
Waxaan ugu yeernaa Bracalente Edge.™
Baro Sida Aan U Sameyno
Xalkeenna saxda ah ee waxsoosaarka ayaa keenaya carqaladeeyayaasha suuqa iyo hoggaamiyeyaasha hal-abuurnimada hawada, dhulka iyo meel kasta oo u dhexeysa.
aerospace Beeraha Automotive Electronics Industrial Caafimaadka Oil & Gas Madadaalo Xeeladaysan | Difaaca
Laga soo bilaabo fikradda illaa abuurista, qalabkaaga saxda ah ee mashiinnada ayaa lagu keenaa waqtiga ugu habboon ee tayada iyo daacadnimada ugu sarraysa.
Sax CNC jeestay
Sax CNC axdi qarameedka
Calaamadeynta / Calaamadeynta
Gages Foomka Wareegtada ah
Mikromitirro dheeri ah
Tijaabiyaasha Qalbi Dhagax
Kordhiyeyaasha Hawada Hawada
Wareejinta CNC Rotary
Xarunta Maaraynta CNC
Wareejinta otomaatiga ah
Qodista, Qodista iyo Taabashada
Deburring / Dhameyn
Qalabka Nadiifinta Qaybaha Gaarka ah
Falanqeeyaha Birta Spectrometer
Birta iyo ridaya
Daawaha Birta Iftiinka
Balaastikada / Sintetiga
Soo-saarista qandaraaska qaaska ah, qorsheynta shaqo-dhimista iyo koox adiga kuu gaar ah.
Eeg sida aan u sameyno
Sannadkii 1950-kii, Silvene Bracalente waxay ka furtay dukaan mashiinka bannaanka Philadelphia, Pennsylvania. Saddex jiil kadib, Bracalente wali qoys ayuu leeyahay oo wuu shaqeeyaa wuxuuna u abuuraa xalal wax soo saar lagu kalsoonaan karo shirkadaha adduunka oo dhan
Kooxdayadu waxay ka tarjumayaan qiyamkeena asaasiga ah. Eeg sababta dadkeenu u yihiin hantida ugu qiimaha badan.
In ka badan seddex fac, Kooxda Waxsoosaarka Bracalente waxay siineysay xalal wax soo saar sax ah suuq caalami ah. Laga soo bilaabo noocyada wax soo saarka, iyo meelaha ku yaal Mareykanka, Shiinaha, Fiyetnaam iyo Hindiya, BMG waxay soo bandhigeysaa tayo, waqtigii loogu talagalay aerospace, beeraha, baabuurta, korantada, warshadaha, caafimaadka, saliida & gaaska, madadaalo iyo taatiko.
© 2022 Kooxda Waxsoosaarka Bracalente
Waxaan u adeegsanaa cookies-ka boggayaga internetka si aan kuu siino khibrada ugu habboon adoo xusuusanaya doorbidyadaada iyo booqashooyinka soo noqnoqda. Adiga oo gujinaya "Waan ku raacsanahay", waxaad ogolaatay isticmaalka DHAMMAAN cookies.
Doorashooyinka Khaaska ah
Xarunta Xulashada Khaaska ah
Waxqabadka iyo sababaha amniga awgood, waxaan u isticmaalnaa Cloudflare shabakadeena CDN.
Markaad foom ka buuxiso boggan, waxaad ogolaatay inaad u oggolaato Bracalente inuu kaydiyo oo ka baaraandego xogtaas shakhsiga ah iyada oo loo marayo Mailchimp iyo Hubspot. Waxaa naga go'an inaan ilaalino oo aan ixtiraamno arimahaaga gaarka ah, waxaanna kaliya u isticmaali doonnaa macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed inaanu ku maamulno koontadaada iyo inaanu siino alaabooyinka iyo adeegyada aad naga codsatay Waqti ka waqti, waxaan jeclaan lahayn inaan kaala soo xiriirno wax soo saarkeena iyo adeegyadeena, iyo waliba waxyaabaha kale ee xiisaha kuu leh. Waad ka bixi kartaa isgaarsiintaan wakhti kasta.
GTranslate waa plugin aan u adeegsano inaan ugu turjuno waxyaabaha ku jira websaydhka luuqado kala duwan. Waxay ku saleysan tahay Google Translate, oo laga yaabo inay dejiso cookie "googtrans" si loo xasuusto luqadda la xushay.
Boggan wuxuu adeegsadaa Google Fonts adoo adeegsanaya Google API. Haddii font uu codsado biraawsarkaaga, cinwaankaaga IP-ga waxaa duubay Google waxaana loo isticmaalaa ujeedooyin gorfeyn ah.
Waxaan u adeegsanaa adeegga YouTube-ka si aan awood ugu siino waxyaabaha fiidiyaha ka socda ee boggan ka socda.
Waxaan u isticmaalnaa Google Analytics iyo Webtrax si aan ula socono taraafikada degelkeenna isla markaana aan u abuurno xayeysiis bartilmaameed ah.